Unogona kundipa mutungamiri wekutanga here kuti uite sei backlinks ye SEO?
Kufungisisa mubvunzo uyu unowanzobvunzwa - kuti ungavaka sei backlinks ye SEO - hapana chirevo chekutanga chekutanga. Zvose zvaunoda pano ndezvokuti ugare uchitsungirira uye utsungirira. Kutaura zvazviri, kushaya kwezvinhu zviviri izvi zvinogona kunge zvakanyanya kukanganisa kunowanzosangana ne webmaster itsva zvakare uye vadzidzisi vebhizimusi vekutsvaga muIndaneti. Ngatitarisei - Tsvakurudzo yekutsvaga injini ndeyekugara kwenguva refu uye inoramba iripo. Zvechokwadi, dzimwe nguva unogona kufara mberi nekufambira mberi kwakanaka kwewebsite yako yekutsvaga nzvimbo paGoogle's SERPs - zvishoma nezvishoma pasina nguva-yakapiwa kuti iwe unoratidzwa mune imwe isingabatsiri mhizha. Saka, pane mienzaniso isingawanzoiti yeiyo kuti uve mutemo kana maitiro akazara. Kunyange zvakadaro, nokuda kwemajeri angu ezuva nezuva pamusoro pekuvakazve backlinks yeSeO, ndakashandisa nzira dzinotevera: kuita zvakakodzera tsvakurudzo dzewebhu, kuwana zvinhu zvakanaka zvakarongeka, kuwana hukama hwakanaka nekwakagadzirwa zvakanaka, kunyora zvinyorwa zvinopa kukosha uye kuchengetedza ukama. Saka, pasi apa ndichadzokorora chirongwa chimwe nechidimbu.
Maitiro ekuvaka zvikomborero zveSeO
Kuita Mazano Akakodzera Mazano
achakuda iwe kuti ushande zvakakwikwidzi kutsvakurudza. Ndinoreva kuti kushandisa zvishandiso paIndaneti Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), kana SEO Toolkit neAhrefs iwe unofanirwa kupedza nguva yekuwana mufananidzo wakazara wehumwe humwe huchauya muhutano hwako hwose hwekuvaka sarudzo. Hauzivi kuti ungavaka sei backlinks ye SEO? Kana kunzwa kunzwa kusaziva kwatinofanira kutanga? Hapana chikonzero chokuzvidya mwoyo - chengetedza tsvakurudzo yakazara yewebsite yevamwe vakwikwidzana vashoma mu niche yako uye tanga kunzwisisa nuts uye mabhoti kubva pakutanga, uye tsigirwa nehuchenjeri hunokosha ruzivo.
Kuwana Zvose Zvakarongeka Zvakanaka
Kana purogiramu yako yekukwikwidza ichipera, unofanira kunge wakagadzirira kuumba urongwa hwekutsvaga uye vanhu chaivo vanobatanidzwa kumabhuku akabudirira kwazvo iyo yakasimba zvakanyanya shure (ini ndinoreva avo vane Pighank uye Domain Authority). Ingoita shanduro yepamusoro kana chero shanduro yekunyora faira kuti unyore pasi uye uchengetedze data inotevera: zita remunyori, email, simba rechiremera. Zvadaro tichazofanira kuwana hukama hwakanaka-chaizvoizvo, ndicho chinhu chinonyanya kusangana nacho paunenge uchidzidza kuti ungavaka sei backlinks ye SEO.
Kuwana Izvo Zvakanaka Kunze
Tanga kutsvaga ruzivo rwakakodzera pane webhusaiti (website). e. , "Taura" kana kuti "nezve" peji mapeji). Kana iwe usingagoni kuwana kero ye email yepamusoro pawebsite, hapana chakasara asi unoramba uchitsvaga chero kupi zvako mumasangano ezvehupfumi, zvakadai se Twitter, Facebook, LinkedIn, kana zvimwe zvipi zvaro zvine chokuita. Hungu, ibasa rinotyisa uye rinopedza nguva, asi basa harisi rakaoma sezvarinogona kuonekwa mushure mekucherechedza.
. Dzivisa kushandisa chero purogiramu yakashandura inoita kuti uwane mashoma akawanda emapiniki pasina kuomesa inzwi rako. Zvose zvaunoda pano ndezvokuti iwe uite zvinhu - iwe unofanirwa kuchinja mutambo kuti udzivise izvo zvinokundikana uye zvinowanzokundikana zvekushanda.
Kunyora Zviri Mukati Zvinonunura Kukosha nekuchengetedza Ukama
Kana wambonzwa zvakare kuti zvatinoda zvaunoda, zvatova kukunda kukuru. Ramba uchifunga mupfungwa, zvisinei, kuti iyo inobatsira pamwe chete. Ingo usakanganwa pamusoro pazvo paunonyora yako zvakanyatsogadziriswa uye zvakagadzikana zvakagadzirwa. Kana imwe nguva nyaya yako yokutanga yakabudiswa zvakabudirira, iva nechokwadi chekugadzirisa ukama huripo-iwe unogona kugara ugovera mamwe magwaro pane webusaiti imwechete! Rwendo rwacho rwatangotanga, sezvo iwe uchifanira kuramba uchishanda kuti uwedzere hukama hutsva, kugovana unyanzvi hwako hwehutano, uye kuwana ruzivo rwakawanda, nekugamuchira kuwedzerwa kukuru kwekutumira motokari mushure mezvose Source .